Soolar ururiyeyaasha: sifooyinka, isticmaalka iyo hawlgalka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
ka qoraxda ururisa Kuleyliyeyaasha kulaylka, sidoo kale loo yaqaan ururiyaha kulaylka qorraxda, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah rakibidda kulaylka qorraxda. Ururiyaha cadceedda waa nooc ka mid ah fallaadhaha cadceedda ka masuulka ah qabashada shucaaca cadceedda oo u beddela tamarta kulaylka. Sidaa darteed, nooca tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxaa loo yaqaan tamarta kulaylka qorraxda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kuwa qoraxda ururiya, sifooyinkooda iyo isticmaalkooda.
1 Maxay yihiin kuwa cadceedda ururiya
2 Noocyada qoraxda aruuriya
3 Qaybaha qoraxda ururisa
Maxay yihiin kuwa cadceedda ururiya
Ujeedada laga leeyahay nooca cadceedu waa in la beddelo tamarta: shucaaca qoraxda ee moduleka qoraxda la kulma waxa loo beddelaa kulayl. Noocyada qaarkood ee rakibaadda kulaylka qorraxda, kulaylkan waxaa loo isticmaalaa in lagu dhaliyo uumi iyo helitaanka koronto, laakiin tani maaha shaqada qorrax-ururinta. Dhanka kale, muraayadaha sawir-qaadista waxay awood u leeyihiin inay si toos ah u dhaliyaan koronto qaab toos ah. Dabaqadaha sawirka Voltaic waa shay lagama maarmaanka u ah rakibaadda qoraxda ee sawir-qaadista.
Marka laga eego dhinaca muuqaalka, ururiyayaasha cadceeddu waxay u adeegsadaan thermodynamics beddelka tamarta. Taas bedelkeeda, muraayadaha sawir-qaadista ma isticmaalaan sharciyada heerkulbeegga si ay ugu beddelaan tamarta qorraxda, laakiin waxay isticmaalaan habka korantada.
Noocyada qoraxda aruuriya
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah kuwa cadceed-ururiya. Ururiyaha cadceedda ee la isticmaalo waxay ku xirnaan doontaa ujeedada. Tusaale ahaan, haddii aan rabno inaan kuleyno barkadda dabaasha heerkul ah 25-28 darajo Celsius guga, waxaan u baahanahay ururiyaha qoraxda fudud, sababtoo ah heerkulka jawigu wuxuu si fudud u gaari karaa nidaamkan xajmiga ama xitaa ka sarreeya. Dhanka kale, haddii aan rabno inaan ku kululeyno dareeraha heerkul ah 200ºC, waxaan u baahan doonaa ururiyaha qoraxda si uu u soo ururiyo shucaaca qorraxda oo aan u wareejinno qadar yar oo dareere ah.
Waqtigan xaadirka ah, suuqa qorraxda, waxaan ku kala saari karnaa noocyada soo socda ee soolariyeyaasha:
Soolariyayaasha fidsan ama fidsan. Noocan ah muraayad qorraxdu waxay qabtaa shucaaca qorraxda ee dusha sare ka helo si uu u kululeeyo dareeraha. Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu qabto kulaylka.
Soolariyeyaasha qoraxda si ay u qabtaan shucaaca qorraxda. Ururiyaha noocaan ah wuxuu qabtaa shucaaca laga helo meel aad u weyn wuxuuna xooga saarayaa oogada yar ee muraayada.
Soolar ururiyaha oo leh tuubo vacuum ah. Soolariyahan cadceedda qaada waxa uu ka kooban yahay tuubooyin cylindrical ah, oo ka samaysan nuugiyeyaasha la xushay, oo ku yaala kursiga muraayada oo ay ku hareeraysan yihiin dhululubo dhalada ah oo hufan.
Codsiyada qoraxda heerkulka hooseeya, badiyaa saxan fidsan ayaa la isticmaalaa soolariyeyaasha cadceedda. Marka heerkulka dareeraha shaqadu uu ka hooseeyo 80ºC, waxaa loo arkaa in codsiyada tamarta qoraxda lagu fuliyo heerkul hooseeya, sida kuleyliyaha barkada dabaasha, wax soo saarka biyaha kulul ee guriga iyo xitaa kululaynta. Taarikadan waxaa loo isticmaali karaa iyada oo aan lahayn dabool dhalada ah ama aan lahayn, taas oo ku xidhan codsiga.
Qaybaha qoraxda ururisa
Ururiyaha cadceedda caadiga ah wuxuu ka kooban yahay walxaha soo socda:
Sare: Daboolka ururiyaha qoraxda waa mid hufan, waxaa laga yaabaa inuu noqdo ama maya. Caadi ahaan waxa laga sameeyaa quraarad, inkasta oo caag sidoo kale loo isticmaalo sababtoo ah way ka jaban tahay wayna fududahay in la maareeyo, laakiin waa inay noqotaa caag gaar ah. Shaqadeedu waa in ay yarayso khasaaraha ka dhalanaya is-wareejinta iyo shucaaca, markaa waa in ay lahaataa gudbinta ugu sarreysa ee suurtogalka ah ee qorraxda. Jiritaanka daboolku wuxuu hagaajiyaa waxqabadka thermodynamic ee muraayadda qorraxda.
Kanaalka hawada: Waa meel bannaan (madhan ama madhan) oo ka soocda xuubka iyo sabuuradda nuugista. Waxa lagu xisaabtami doona marka la xisaabinayo dhumucdeeda si loo dheellitiro khasaaraha ka dhalanaya isku shubidda iyo heerkulka sare ee iman kara haddii uu aad u cidhiidhi yahay.
Saxanka nuugista: Saxanka nuugaya waa curiye nuuga tamarta qoraxda oo u gudbisa dareeraha dhex wareegaya dhuumaha. Dabeecadda ugu weyn ee looxa waa in ay leedahay nuugista tamarta qorraxda iyo shucaaca kulaylka yar. Maadaama alaabta caadiga ahi aanay buuxin shuruudahan, agabka la isku daray ayaa loo isticmaalaa si loo helo saamiga nuugista/sii daynta ugu fiican.
Tubooyinka ama tuubooyinka: Tuubooyinku waxay la xiriiraan taarikada nuugista (mararka qaarkood welded) si ay ugu beddelaan tamarta ilaa ugu badnaan. Xaaladda tuubooyinka, dareeraha ayaa kululeynaya oo geli doona haanta ururinta.
Lakabka dahaarka: Ujeedada lakabka dahaarka waa in la daboolo nidaamka si looga fogaado loona yareeyo khasaaraha. Sababtoo ah dahaarka ayaa ah kan ugu fiican, walxaha dahaarka ah waa inay lahaadaan kuleylka kuleylka hooseeya si loo yareeyo kuleylka kuleylka ee dibadda.
Accumulator: Accumulator-ku waa curiye ikhtiyaari ah, mararka qaarkood waa qayb muhiim ah oo ka mid ah muraayadda qorraxda, xaaladahan waxay badanaa ku yaalaan si toos ah korka ama goobta muuqaalka dhow. Xaalado badan, batarigu maaha qayb ka mid ah muraayadda qorraxda, laakiin waa habka kulaylka.
Soolar-ururiyayaasha waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu bixiyo biyaha kulul iyo kuleylinta ama in laga dhaliyo koronto.
Biyaha kulul ee guriga iyo kuwa kululeeyayaasha, haanta biyuhu waxay kaydisaa biyaha guriga marka ay taabtaan dareeraha dhex mara gariiradda. Gariiradu waxay u ogolaataa dareeraha inuu u gudbiyo tamarta kulaylka ee biyaha isagoo aan wasakhayn biyaha. Biyahan waxaa loo isticmaali karaa sidii biyo kulul oo gudaha ah (80% is dhexgalka), sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu kabo kuleylka dhulka hoostiisa ee qolka (10% isdhexgalka). Qalabka qoraxda ee kulaylka ah ayaa ku siin kara xaddi badan oo biyo kulul ah, Laakiin sababtoo ah xasillooni la'aanta tamarta qorraxda, si buuxda uma beddeli karaan hababka kuleylka caadiga ah.
Soollarka loo isticmaalo in lagu dhaliyo koronto waxay u baahan yihiin inay kulaylka kuleyliyaha ku kululeeyaan. Marka dareeruhu dhammeeyo isbeddelka wejiga thermodynamic oo uu galo wajiga gaasta, waxa loo diraa marawaxada kuleyliyaha, taasoo dhaqdhaqaaqa uumiga biyaha u beddelaa koronto. Nidaamka noocaan ah waxaa loo yaqaannaa thermodynamics qorraxda wuxuuna u baahan yahay boos badan si loogu rakibo muraayadaha qorraxda iyo qorraxda joogtada ah. Tusaalooyinka dhirtan ayaa lagu rakibay saxaraha.
Marka la qeexayo oo la rakibayo rakibaadaha kulaylka qorraxda, waa in lagu xisaabtamaa in ururiyeyaasha cadceedda loo qaybiyo kooxo. Kooxahan qoraxda aruuriya Had iyo jeer waa inay ka kooban yihiin cutubyo isku qaab ah oo loo qaybiyo si siman intii suurtagal ah. Waxa jira laba ikhtiyaar ama nooc oo aasaasi ah oo lagu kooxeeyo laba ama wax ka badan oo wax soo ururiya: taxane ama is barbar socda. Intaa waxaa dheer, goobta biyaha lagu ururiyo waxaa lagu habeyn karaa iyadoo la isku daray laba kooxood, oo ah waxa aan u naqaanno wareegyada kooxeed ama isku-dhafka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto kuwa qoraxda aruuriya iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Soolar-ururinta